Ukuchuma kunye nokukhulelwa abavelisi kunye nabaxhasi - China ukuchuma kunye nokukhulelwa kwefektri
Isixhobo sovavanyo esikhawulezayo sovavanyo
I-PROM yoVavanyo olukhawulezileyo lweSixhobo soVavanyo 500150: uLwimi lweSwab: Inguqulelo yesiNgesi: 01 Umhla wokuSebenza: 2015-05 Ukulungiselela ukusetyenziswa kwe-vitro diagnostic kuphela. UKUSETYENZISWA KWENJONGO Uvavanyo lweStrongStep® PROM luvavanyo olubonakalayo, olusemgangathweni lokuvavanywa kwe-immunochromatographic yokufumanisa i-IGFBP-1 ukusuka kulwelo lwe-amniotic kwimfihlo yelungu lobufazi ngexesha lokukhulelwa. Uvavanyo lujolise ekusetyenzisweni kobuchwephesha ukunceda ekuchongeni ukophuka kweembumba zomntwana (ROM) kubafazi abakhulelweyo. INTSHAYELELO Ingqwalasela ...
Isixhobo sokuvavanya okukhawulezileyo kweFibronectin
Isixhobo sokuvavanywa okukhawulezileyo kweFibronectin Isixhobo sovavanyo olukhawulezileyo 500160 Isampuli: Ulwimi lweSwab: Inguqulelo yesiNgesi: 01 Umhla wokuSebenza: 2015-05 Ukusetyenziswa kwe-vitro diagnostic kuphela. UKUSETYENZISWA NGOKUGQIBELEYO Uvavanyo lweStrongStep® PROM luvavanyo lwe-immunochromatographic olutolikwa ngokubonakalayo ekujongwe ukuba lusetyenziselwe ukufumanisa ubungakanani be-fetal fibronectin kwimfihlo ye-cervicovaginal. Ubukho be-fetal fibronectin kwimfihlo ye-cervicovaginal phakathi kweeveki ezingama-22, iintsuku eziyi-0 kunye neeveki ezingama-34, iintsuku ezi-6 zokukhulelwa ...
Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket,